Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Diyaaradda Super Hornet Fighter oo ku burburtay Saxaraha California
Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Dalxiiska • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Goobta: Beerta Qaranka ee Dooxada Dhimashada. Diyaaradda: Diyaarad dagaal oo ay leeyihiin Ciidanka Badda Mareykanka ee F/A-18F Super Hornet. Dhacdadu: Waxay ku burburtay qaybta koonfureed ee lama -degaanka ah.
Ciidanka Badda ayaa duuliyeyaal ku tababarayay Beerta Qaranka ee Dooxada Dhimashada tan iyo 1930 -kii.
Shilkan diyaaradda dagaalku wuxuu dhacay abbaare 3 -dii galabnimo ee Oktoobar 4 wuxuuna ka tirsan yahay Tijaabada Hawada iyo Qiimeynta Hawadda (VX) 9.
Diyaarad isku mid ah-diyaaradda dagaalka ee F/A-18F-ayaa ku dhacday Dooxada Dhimashada ee 2019 meel lagu naanayso Star Wars Canyon.
Waa markii labaad oo diyaarad dagaal oo ay leeyihiin ciidamada badda Mareykanka ay ku burburto Beerta Qaranka Dooxada Dhimashada 3 -dii sano ee la soo dhaafay. Caadiyan duulimaadyada tababarka milatariga looma oggola beeraha qaranka, si kastaba ha ahaatee, qaybtan Dooxada Dhimashada oo shilalkii dhawaan ka dhacay ayaa si gaar ah loogu qoondeeyey goob iyaga loogu talagalay markii Koongarasku ku daray aagga beerta 27 sano ka hor. Ciidanka Badda ayaa halkan ku tababarayay duuliyeyaal ilaa 1930 -kii.
Shilka diyaaradda dagaalku wuxuu dhacay abbaare 3 -dii galabnimo ee Oktoobar 4 wuxuuna ka tirsan yahay Kooxda Tijaabinta iyo Qiimaynta Hawada (VX) 9. Nasiib wanaag, duuliyihii wuxuu awooday inuu si guul leh u saaro waxaana lagu daweeyay dhaawacyo fudud isbitaal ku yaal Las Vegas iyo la sii daayay.
2019, isla diyaaraddan, F/A-18F Super Hornet, wuxuu ku dhacay Rainbow Canyon, oo sidoo kale loo yaqaan Star Wars Canyon, oo ku taal aagga galbeed ee beerta loo yaqaan Aabbaha Crowly Vista Point. Nasiib darro, shilkaan waxaa ku dhintay Lt. Charles Z. Walker wuxuuna sababay dhaawac dhowr qof oo wadada marayay.
Darbiyada Star Wars Canyon wuxuu ka kooban yahay dhagaxa Paleozoic ee metamorphosed iyo dhagaxa kale ee pyroclastic. Isku -darka agabkan dhagaxa ah wuxuu abuuray darbiyo cas, cawl, iyo casaan la mid ah meeraha khiyaaliga ah ee Star Wars Tatooine, sidaa darteed naaneyska.
Waa meel caan ah oo loogu talagay in diyaaradaha wax duqeeya ay ku qaadaan diyaaradaha dagaalka ee Maraykanka oo samaynaya tabobarro joog hoose ku duulaya marka ay ku dul maraan jiidaha cidhiidhiga ah ee Dooxada Dhimashada. Ma jirin cid booqatay baarkinka halka shilku ka dhacay meel u dhow Saldhigga Naval Air Hub Station China Lake, oo xuduud la leh baarkinka koonfur -galbeed.
Diyaaradaha dagaalka xawaare ku dhex maraya dooxa 200 ilaa 300 mph iyo marka ay u duulayaan sida ugu hooseysa ilaa 200 fuudh oo ka sarreysa dabaqa canyon, weli waxay ka hooseeyaan dhawr boqol oo fiit oo keliya goobjoogayaasha qarkiisa. Bar -tilmaameedyada diyaaraduhu aad bay ugu dhow yihiin diyaaradaha oo inta badan waxay arki karaan wejiga duuliyeyaasha, kuwaas oo, ku waajib ah inay siiyaan xoogaa tilmaamo iyo tilmaamo kuwa ilaaliya.